Tsindrihazolena Mpandrafitra nolavina karama ary naiditra am-ponja
Ny alarobia 24 jolay ho avy izao no hiakatra fitsarana ny raim-pianakaviana iray lazain’ny fianakaviany fa tratran’ny tsindrihazolena tanteraka.
Voa roa tahaka ny naratran’ny famaky, sady voan’ny famaky no mandoa loso iray. Niatrana am-bava-basy tamin’ny mpitandro filaminana avy hatrany ny lehilahy iray raha niakatra an’Antananarivo handray karama no anton-diany. Tsy nanampo na inona na inona fa fitakiana valin-kasasarana no niakarana ny renivohitra kinanjo fiakarana fampanoavana teo amin’ny fitsarana Anosy no setriny. Raim-pianakaviana iray mpandrafitra no naiditra am-ponja. Voaendrikendrika nangalatra izy kanefa heverina fa tsy nahaloa ny karamany ny mpampiasa azy, araka ny fitantaran’ny vadiny tamin’ireo mpanao gazety, afak’omaly atoandro.
“Vary izao no namidy natao saran-dalana sy nitondrana nanaterana sakafo ho an’ny vadiko any am-ponja. 12.000 ariary ny saran-dalanay avy any ambanivohitra Antsirabe. Niantso ny “patron” izay niasany ny vadiko avy any an-tanàna mahakasika ny karamany. Nasain’io mpampiasa azy io niakatra taty Antananarivo izy. Nony tonga taty an-drenivohitra anefa, zandary no niandry azy. Voapanga ho nangalatra izy, dia izao nampidirina am-ponja vonjimaika izao. Anio alakamisy 4 Jolay ny fitsarana azy. Fongana tanteraka ny tahirinay sy ny fananana kelinay nentina natao saran-dalana sy nanaterana sakafo aty am-ponja. Efa voaroaka tsy nisy nianatra koa ireo zanakay fa tsy nahavita saram-pianarana ka najanon’ny tompon’andraikitry ny sekoly. Na ny mpisolovava aza tsy manana vola ho amin’izany izahay ka resy ambony ihany na manana ny marina aza. Mitodika amin’ireo manampahefana manoloana izao tsy rariny izao”, hoy i Mariette Razanadrafara, raha nitafa tamin’ireo mpanao gazety maro teo Anosy, afak’omaly. Miandrandra ireo mpiaro ny zon’olombelona hanara-maso ity raharaha ity.
Haja Nirina/ Rakotobe